Odowaa: "Madaxweynahu hal maalin ma tanaasulin" - Caasimada Online
Home Warar Odowaa: “Madaxweynahu hal maalin ma tanaasulin”
Odowaa: “Madaxweynahu hal maalin ma tanaasulin”
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa), ahna haatan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa ka falceliyey khudbadii shalay madaxweyynaha ee baarlamaanka.
Odowaa ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdullahi Farmaaho uusan hal maalin sameyn wax tanaasul ah, gaar ahaan kiisasii ay la kulantay dowladdiisa muddada 4 sano ah ee ay jirtay, isaga oo tusaale u soo qaatay, dhiibistii Qalbi-Dhagax, ridistii Jawaari, arrinka Gedo & ridistiisii Ra’iisul wasaare Khayre.
“Madaxweynuhu wax kale oo kasta haba sheegtee waan tanaasulay inuu Ummadda u sheego waa ayaan darro iyo marin habaabin cusub,”. ayuu yiri xildhibaan Odowaa.
Farmaajo iyo Tanaasul: Mashriq iyo Magrib
Shalay waxaan ku maqanaa meel aan anteeno fiican lahayn.
Waxaan saakay dhagaysatay khudbada Madaxweynaha saacaduhu ka harsanyihiin muddo xileedkiisa uu baarlamaanka shaley ka jeediyay